Fikarohana momba ny firaisana Fanambarana sy Fanolorana ny Reincarnation Research: Manome anjara izao hanampiana amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa! - Fikarohana Reincarnation
Fanambarana sy fanomezana momba ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao: Mandraisa anjara ankehitriny hamoronana tontolo milamina kokoa!
Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao: Ny fampiroboroboana ny fiovan'ny fiaraha-monina miorina eo amin'ny fiaraha-monina dia afaka mitondra
Ny tanjon'ny ReincarnationResearch.com dia ny fampiroboroboana ny fikarohana reincarnation, ny fanaparitahana porofo momba ny reincarnation ary ny fanaovana ny fiovana ara-tsosialy izay mety ho vokatry ny fiainany taloha.
Nandinika ny tranga vao teraka indray ny virijiny, indrindra ireo izay navoakan'ny tara Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia, amin'ny fitambarany, dia manome porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray. Ny fikarohana nataon'i Dr. Stevenson dia nifantoka tamin'ny ankizy izay nanana fahatsiarovan-tena taloha izay azo hamarinina amin'ny zava-misy. Nanangona 1500 mahery izy hanamarina ireo tranga fitadidiana fiainana taloha.
Tsara homarihina fa Jim Tucker, MD, mpitsabo aretin-tsaina iray izay nitondra an'i Dr. Stevenson tao amin'ny University of Virginia, dia nilaza tao amin'ny fahitalavitra amerikanina fa misy porofo ampy ankehitriny mba hamaranana fa misy ny reincarnation. Ny Dr. Tucker no nanao an'io fanambarana io rehefa niseho tamin'ny fahitalavitra niaraka tamin'i James Leininger izy James Huston Jr. | Raharaha James Leininger dia nalefa tamin'ny ABC Primetime tao amin'ny 2005.
Ian Stevenson dia nanoratra tamin'ny fomba sarotra sy akademika, satria mpahay siansa mpiara-mivavaka aminy no kendrena azy. Ao amin'ny tranokala ReincarnationResearch.com, ny fombafomba momba ny fiainany taloha dia aseho ho tantara mora vakiana, mba hahafahan'izy ireo hidirana amin'ny rehetra.
Fanomezana: Fanampiana Mamorona Tontolo Mahafaly Mahafa-po ary Mamela T-Shirt maimaim-poana
Porofon'ny reincarnation manaporofo fa ny finoana, ny zom-pirenena ary ny firazanana dia mety hiova avy amin'ny nofo iray hafa. Ny ankamaroan'ny fifandirana sy ny ady dia miankina amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo. Ny porofon'ny reincarnation dia mety hanalefaka ny fifandirana mifototra amin'ny fahasamihafana.
Ny tranga iray momba ny firaisana amin'ny vatana dia mampiseho fa ny fivavahana sy ny zom-pirenena dia afaka miova avy amin'ny fiainana mandra-pahafaty Anne Frank | Barbro Karlen. Tsindrio ny sary nomena etsy ambony hanitarana sy hanombatombana ny fitoviana endri-tarehy.
Ireo tranga hafa ao amin'ny vatana hafa izay mampiseho ny fiovan'ny fivavahana amin'ny fiainana mandritra ny androm-piainany, anisan'izany ny raharaha Miozolomana, dia afaka averina jerena amin'ny:
Firaisana ara-piraisana ara-nofo amin'ny fanovana ny finoana, ny maha-firenena ary ny fiaraha-monina
Mba hananana fiantraikany tsara, dia tsy maintsy alain'ireo olona samy hafa kolontsaina io fampahalalana io. Izahay dia mitaky ny fanampian'ny olona izay afaka mampiroborobo ny ReincarnationResearch.com amin'ny kolontsainany, raha toa ka manasongadina ny Google Translate ny tranonkalantsika.
Izahay dia mitady vola hamatsiam-bola amin'ny dokam-barotra hitondra olona bebe kokoa amin'ny tranokalanay.
Ireo izay manome $ 50 na mihoatra dia afaka mahazo ReincarnationResearch.com T Shirt maimaim-poana (mpamatsy vola amerikana fotsiny), raha ilaina. Ny eo alohan'ilay lobaka dia misy ny sary atsy ambony sy ankavanana, izay afovoany ary 6 santimetatra ny haavony ary 3 santimetatra ny sakany. Ny ao ambadin'ny lobaka dia misy andianteny manaraka vita pirinty aminy amin'ny endritsoratra volamena:
ReincarnationResearch.com: làlana mankany amin'ny fandriampahalemana
Raha te hanana T Shirt ReincarnationResearch.com ianao dia miangavy anao hanao fanomezana ary hifandray aminao aho avy eo hahitanao izay habe tadiavinao. Azonao atao ihany koa ny manoratra amiko, Walter Semkiw, MD, amin'ny: walter@ReincarnationResearch.com
Mandehana any amin'ny pejinay fanomezana ary miangavy ny vondrom-piarahamoninay: Donate Now
Mariho fa ho an'ny olom-pirenena Amerikana, Ny fandraisanao anjara dia fanontam-bola, satria ho lasa any amin'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa ho an'ny ray aman-dreny, ny Institut for integration of science, intuition and spirit (IISIS). Azafady, azafady fa ny anaram-boninahitry ny tsy tombom-barotra nataontsika tamin'ny 2004, efa ela talohan'ny nanjavonan'ny acronym.
Jereo ny horonan-tsarimihetsika virjiny virjiny virjiny (mihoatra ny fijery 6.3 tapitrisa): Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao
Ampidiro ny vondrona Facebook-nay, Fikarohana momba ny firaisana, ahazoana fanavaozana momba ireo tranga vaovao napetraka tao amin'ity tranokala ity.
Farany, te-hizara fanoharana iray amin'ny bokiko aho, ateraka indray:
Izahay dia trondro, fa tsy ny renirano
Alao sary an-tsaina ny hetsika ara-kolontsaina sy fivavahana lehibe eto amin'izao tontolo izao amin'ny renirano. Ny mpaminany na ny fahitana dia toy ny loharano, izay manomboka filozofia, firenena na fivavahana. Rehefa manohana ny mpanorina ny mpanara-dia dia mitombo hatrany ny rivotra. Ny renirano dia manorina sy mitete tsikelikely, mandritra ny taonjato maro. Ireo mpanohana dia mandray anjara amin'ny hetsika, na dia ireo zavakanto, ny haitao, ny literatiora ary ny mozika aza, ary ny renirano dia miha-lehibe sy lalina kokoa.
Alao sary an-tsaina hoe tahaka ny trondro izay midina avy any amin'ny tontolo ara-panahy isika ary tonga ao anaty renirano. Isaky ny androm-piainantsika dia milomay ao amin'ny Reniranon'i Mosesy isika mandritra ny androm-piainany iray hafa, isika dia milomay ao amin'ny Reniranon'i Kristy, ao amin'ny iray hafa ny Reniranon'i Mohammed, amin'ny iray hafa, ny Reniranon'i Bouddha, amin'ny iray hafa, ny Reniranon'ny Hindoisma, ary noho izany on. Na dia misy rano ao anaty renirano manokana aza, dia miezaka mamantatra tanteraka an'io renirano ara-kolotsaina io isika. Lasa Kristianina isika, Silamo, Jiosy, Hindoa na Bodista. Fantatray amin'ny karazana foko, foko ary zom-pirenena izay hitanay ny tenanay. Adinontsika fa amin'ny andavan'andro hafa koa, dia marefo amin'ny renirano hafa koa isika.
Ho an'ny fandriampahalemana hanjaka eto an-tany, tsy maintsy mahatsapa ny lalana isan-karazany andehanantsika isika ary ireo famantarana samihafa izay heverintsika. Tsy maintsy tsaroantsika fa amin'ny lafiny ara-panahy, isika dia trondro, fa tsy ny renirano. Isika dia fanahy manerantany izay mahatsapa ireo renirano samihafa ireo. Aoka isika hiaina izany fanentanana izany, mba hahafahantsika miaina amim-piadanana.